အဘယ်ကြောင့်ထုံးစံခြံစည်းရိုးများအတွက်စက်မှုလူမီနီယံ profile များကိုရွေးချယ်?
The Times တီထွင်မှုနှင့်အတူစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများသည်စက်ပစ္စည်းများ၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုနှင့် ၀ န်ထမ်းများ၏လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ရန်လုံခြုံရေးအထီးကျန်ခြင်းကိုခြံစည်းရိုးတွင်တပ်ဆင်ရန်ကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်။ ထုံးစံခြံစည်းရိုးများအတွက်စက်မှုအလူမီနီယံကော? ကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ ...
စက်မှုအလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းသည်ပရိုဖိုင်းထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုသောစက်မှုလုပ်ငန်းမှထုတ်လုပ်သောအလူမီနီယမ်အလွိုင်းကူခြင်းဖြစ်သည်။ အလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းသေစိတ်ကြိုက်သူတို့အား 20,30,40,50,60,80,90,100,120 နှင့်အခြားအလူမီနီယမ်၏စီးရီးစီးရီးများအပြင်, လူမီနီယမ်အလွိုင်းပရိုဖိုင်းကိုလည်းရှိနိုင်ပါသည်ဆိုလိုသည်
၁ ။ အကယ်၍ သင်သည်ပစ္စည်း၏ပြင်ပဘောင်အတွက်အလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်လိုပါက၊ အထူးသဖြင့်စက်မှုအလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဘောင်အလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းဖြစ်သောကြောင့်သတ်မှတ်ချက်များစွာရှိပါသည်။